Public Kura | » ‘सुरक्षित सुत्केरीका लागि गाउँमा अस्पताल स्थापना गर्नेछु’ ‘सुरक्षित सुत्केरीका लागि गाउँमा अस्पताल स्थापना गर्नेछु’ – Public Kura
‘सुरक्षित सुत्केरीका लागि गाउँमा अस्पताल स्थापना गर्नेछु’
कपिलवस्तुको मायादेबी गाउँपालिका–२, भैसकुण्डाका २९ वर्षीय फजलुर्र खाँ (फैजल खाँ) पूर्व १९ वर्ष मूनिको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन् । गाउँ, जिल्ला, क्षेत्र हुँदैं मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ख्याती प्राप्त गरेका खाँ यतिबेला कपिलवस्तुको राजनीतिमा चर्चाको शिखरमा छन् । पाँच वर्षअघि प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका उनले सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । यसपाली नेकपा एकीकृत समाजबादीबाट कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । देश–बिदेशमा क्रिकेट खेलमा शतक हानेर चर्चा कमाएका खाँ अहिले राजनीतिक खेलाडी बन्न पुगेका छन् । सानैदेखि क्रिकेट क्रेजले खेलाडी बनेका उनले समाजसेवाका लागि राजनीतिमा दोस्रो इनिङ सुरु गरेको बताउँछन् । दुईपटक मैदानमा उत्रिसकेका उनले खेल भन्दा राजनीति नितान्त फरक विषय भएको बताए । ६–७ वर्ष राष्ट्रिय टिममा रहेर क्रिकेटमा योगदान पु¥याएका उनले राजनीतिको मैदानमा समेत उत्तिकै मिहेनत गरिरहेको बताएका छन् । पालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार व्यवस्थापनमा जोड दिइरहेका उनले भ्रष्टाचारमुक्त साशनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । पूर्व क्रिकेटर खानसित पब्लिक कुराले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
लामो समय खेल जीवन बिताएपछि राजनीतिबाट आफ्नो गाउँको सेवा गर्ने लहर जाग्यो । त्यसका लागि प्रत्यक्ष राजनीतिमा उत्रिएँ । राजनीतिमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने लक्ष्यसाथ आएको छु । क्रिकेट खेल जस्तो राजनीति होइन् । तर, सावधानीपूर्वक खेल्ने बिचारले आएको छु । त्यहीँ अनुसार रणनीति बनाएर चुनाव प्रचारमा होमिएको छु । मायादेवीका युवादेखि बृद्धासम्मले आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ । यसले मलाई हौंसला मिलेको छ ।
तपाइँका एजेण्डा कस्ता छन् ?
अध्यक्ष निर्वाचित भएमा पालिकाबाट पाउने सवारीसाधन र पारिश्रमिक तथा भत्ता लगायत कुनै पनि सुविधा लिने छैन । त्यसवापतको रकमले खेल मैदान निर्माणमा खर्च गर्नेछु । कक्षा १२ उत्तीर्ण सबै छात्रछात्रालाई निःशुल्क ल्यापटपको व्यवस्था गर्छु । गरिब र विपन्न किशोरीको विवाहका लागि डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाबाट अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेछु । क्रिकेटमा नेपालले प्राप्त गरिरहेको सफलता जस्तै गाउँपालिकालाई नमूना र सफल बनाउने छु ।
बिजय प्राप्त गरेपछि तपाइँले गर्ने मुख्य काम के–के हुन् ?
मायादेवी गाउँपालिकामा अहिले इमान्दार र बेइमानबीच लडाइ भइरहेको छ । खासगरी यो भ्रष्टाचारबिरुद्धको लडाई हो । गाउँपालिकामा अलिहेसम्म लुटतन्त्र मात्रै छ । बिगतमा चुनावमा पराजित भए पनि पाँच वर्ष म जनताको सेवामा थिएँ । त्यसैले अहिले सबैले मलाई सघाइरहेका छन् । जनताका समस्यासित भिजेको छु । मैले जितेपछि विद्यालय स्थापनामा जोड दिनेछु । सुरक्षित सुत्केरीका लागि गाउँमा अस्पताल स्थापना गर्नेछु । यहाँका धेरै युवा बेरोजगार छन् । त्यसले पालिकामा धेरैको चुलो बल्दैन । चुलो बाल्ने वातावरण बनाउन रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने छु । खासमा बिगत पाँच वर्षमा राजनीति बुझेँ । अव त्यसलाई व्यवहारमा देखाउँछु ।
तपाइँको खेल जीवनबारे केही बताउनुस् न ?
मैले सन् २०११ देखि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न थालेका हुँ । सन् २०१६ सम्म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल खेलेँ । सन् २०११ मा थाइल्याण्डमा आयोजना भएको अन्डर १९ एसीसी ट्रफी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ओमानविरुद्ध शतक हानेपछि मेरो धेरै चर्चा भयो । सन् २०१२ मा मलेशियामा सपन्न एशियन कप क्वालिफाइङ प्रतियोगितामा पनि खेलेको थिएँ । सन् २०१३ मा अष्ट्रेलियामा आयोजना भएको वल्र्ड कप क्वालिफाइङ प्रतियोगिता पनि खेलेको थिएँ । अन्डर १९ मा छनोट प्रतियोगिताका क्रममा पोखराविरुद्ध भैरहवाबाट खेलेर विष्फोटक व्याटिङ गरेपछि मेरो राष्ट्रिय टिममा छनोट भएको थियो । त्यसबेला मैले १ सय ३१ रन बनाएको थिएँ । सन् २०१४ मा पेप्सी स्टायाण्डर्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिताका एपीएफविरुद्ध फाइनल खेलमो उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेको थिएँ । उक्त फाइनलमा १ सय २५ रन बनाएपछि चर्चा भएको थियो । सन् २०१३ मा धनगढीमा संपन्न एनपीएलमा १८ बलमा ६६ रन बनाए पछि मेरो खेल जीवनले उचाई पाएको हो ।
क्रिकेट खेलले राजनीतिमा कस्तो प्रेरणा दिन्छ ?
क्रिकेट खेलेर जसरी चिनिए त्यसरी नै राजनीति गरेर नाम राख्छु । खेलाडीले राम्रै गर्न सक्छन् भन्ने देखाउने गरि योजना र काम आँटेको छु । गाउँपालिकालाई हिलो र धुलो मुक्त बनाउँछु । खरका छाना मुक्त बनाउँछु । हरेक विद्यालयमा वर्षेनि खेल सामग्री वितरण गर्छु । विद्यार्थीलाई खेलप्रति उत्साहित गरेर लगाब बढाउँछु । खेलले अनुशासन सिकाएको छ । लगन सिकाएको छ । क्रिकेट खेल्दा आर्जन गरेको अनुशासन र लगत राजनीतिमा पनि देखाउँछु ।
तपाइँको चुनाव प्रचार कस्तो चलिरहेको छ ?
अहिले नियमित घरदैलो कार्यक्रममा ब्यस्त छु । त्यस क्रममा सर्वसाधरणको राम्रो सद्भाव आइरहेको छ । सबैले यसपटक फैजललाई अवसर दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । युवा नेतृत्व खोजेका छन् । पुरानो राजनीतिबाट वाक्क भइसकेका छन् । गाउँपालिकामा परिवर्तन चाहेका छन् । त्यो म जस्तो युवाबाट सम्भव हुने देखेका छन् । मैले धेरै समय मतदातासित भेटघाटमा बिताइरहेको छ । आफ्ना एजेण्डा प्रष्ट राखिरहेको छु ।
अन्तमा तपाइँको भन्नु केही छ ?
मधेशको समाज बेलाबेला बिभाजित भइरहन्छ । मैले नेतृत्व गर्ने मौका पाए भने सबैभन्दा पहिला त्यसलाई जोड्ने काम गर्छु । साम्प्रदायिक सद्भाव कसिलो बनाउन भूमिका खेल्नेछु । विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय कसरी मिलेर बसेका छन् भनेर उदाहरण देखाउँछु । अशिक्षा चेतनाले गाउँमा विकास हुन सकेको छैन् । त्यसलाई चिरेर विकासमा युवा सहभागिता बढाउन परिवारले सघाउने वातावरण बनाउने छु । पालिकाको नेतृत्व गर्दै यहाँ हुने सबै क्रियाकलामा युवालाई अघि बढाउँछु ।